Umbuzo wesampuli kunye nezimpendulo ze-ITIL Exam 2017 - ITS Tech School
Umbuzo wesampuli kunye nezimpendulo ze-ITIL Exam 2017
I-ITIL yovavanyo lwe-2017-Umbuzo wesempendulo kunye nezimpendulo
I-ITIL yilungiselelo lolawulo lweenkonzo ze-IT olulungiselela iinkonzo ze-IT kunye neemfuno zoshishino. Ukwazi ama-rudiments we-ITIL ngolu hlobo lubaluleke kakhulu kwimibutho. I-ITIL isatifikethi iyaziqonda iingcali kunye ne-ITIL kunye nokuphunyezwa kwayo. Nazi umzekelo umbuzo kunye nezimpendulo zolu vavanyo.
1. I-ITIL inceda njani ukunciphisa iindleko kunye nokunciphisa iindleko zokufumana iimali ze-IT?
Utyalo-mali lwe-IT kunye nabasebenzi baqhekeza ixesha elifanelekileyo lomsebenzi njengoko umsebenzi ongabhalwayo ufumana isidingo phezu komsebenzi olungiselelwe. I-ITIL yenza ukuba imibutho ibambe le ngqungquthela kwaye ixhobise abameli ukuba bagxininise iindleko zokuhlala kunye nomnye umsebenzi kwindawo yabo yobuchule.
2. Ngubani okwazi ukukhetha umyalelo wenguqu ephakanyisiweyo ngaphakathi kwe-ITIL inkqubo yokuLawula ukuTshintsho ehambelanayo?
Okukhethwa ngokuqhelekileyo kuthathwa nguMphathi weTshintsho. Uyaqinisekisa ukuba iinjongo zifezekisa iinjongo zabo ngaphakathi ngangokunokwenzeka kwaye zichitha imingcele ngokunyusa ukwamkela abasebenzi kunye nokusetyenziswa. Ugxininisa kwiinguqu kwiinkqubo zoshishino, izithuba zomsebenzi, izikhokelo kunye neendlela ezintsha kunye nezakhiwo.
3. Yintoni uvavanyo oluyenziwe emva kokuba utshintsho lwenziwe?
Uvavanyo lubizwa UkuPhunyezwa koPhuculo lwePost (PIR). Oku kukuhlaziywa nokuvavanya kwesisombululo sokusebenza esipheleleyo. Yenziwa emva kokusebenza ngokusebenzayo, kwezinye iimeko emva kokuphela komsebenzi. I-PIR ihlola ukulungelelaniswa kwesakhelo sokwenza isikhokelo emva kokuba isikhokelo siye senziwa kwimeko yokudala malunga neenyanga ezintandathu.
4. Yiyiphi inkqubo ye-ITIL eqinisekisa ukuba umbutho uyazi malunga nokutsha kunye nokutsha kwezinto ezintsha?
Ulawulo lweZakhono luqinisekisa ukuba umbutho uhlala ekhumbula inguqulelo entsha. Iqinisekisa ukuba ulawulo lwe-IT lufikeleleka ngexesha eligqibeleleyo kwivolisi echanekileyo kwiindleko ezifanelekileyo kunye nokuphumelela okuphumelelayo.
5. Ngethuba elide lokuba uMphathi weNqanaba leNkonzo ufuna ukuqinisekiswa malunga nokuba ngaphakathi kwiDisk yaSevisi yangaphakathi iphendule njani inokufikelela kwisantya esithile kwiimitha ze-10, apho ingxelo yesivumelwano seDiski yeeNkonzo esiya kubhalwa iya kubhalwa?
Kukho isivumelwano esibizwa ngokuba yi-agreement level level (OLA) esichaza indlela iindlela ezihlukeneyo ze-IT kwisicwangciso sombutho ukuhambisa inkonzo okanye ilungiselelo leenkonzo. Kucwangciselwe ukunyamekela imiba yeendawo zokugcina izakhiwo ze-IT ngokubonisa indlela yokwenza iinkqubo kunye neenkonzo ze-IT ezenziwa yiofisi nganye.
6. Ziziphi iinkqubo ezimbini zoLawulo lweNkonzo ezisebenzisa isicwangciso solawulo kunye novavanyo lweengozi?
Ezi zimbini iinkqubo yi-IT Service Continuity Management kunye nokuPhathwa kweNtlawulo.
7. Cacisa imigaqo yePolifoliyo yenkonzo, i-Service inventory kunye nenkonzo yombhobho.
Iiphothifoliyo zenkonzo: Oku kubonakalisa iinkonzo ezinikezwa ngumthengisi wenkonzo ngokubhekiselele kwiimarike ezahlukeneyo kunye nabaxhasi. Ulawulo lwePortfolio yePortfolio lijongene nepotfoliyo yenkonzo. Iqinisekisa ukuba umboneleli wenkonzo unenkonzo ekuhlangabezaneni neziphumo zoshishino ezibalulekileyo kwinqanaba elifanelekileyo lokucatshulwa.
Inkcazo yeNkonzo: Le ngqutyana yePoliyoli yeNkonzo. Irekhoda iinkonzo ezilungiselelwe ukunikezelwa kubaxumi. Inkcazo yenkonzo ye-IT irekhoda iimpahla ezifumanekayo kunye neminikelo yombutho.
Umbhobho wenkonzo: Iquka iinkonzo ezisetyenziswayo. Ithetha ngeenkonzo ezizayo eziza kuthi zenziwe ngumboneleli wenkonzo.
8. Cacisa i-CMIS, i-AMIS kunye ne-KEDB.
Isikhokelo solwazi soLawulo lweZakhono (i-CMIS): Yilungelelaniso lwe-IT isiseko solwazi, ukusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kolwazi oluqokelelweyo kunye nokubeka ubuncinci bodwa.
Isikhokelo solwazi soLawulo lokufikelela (AMIS): Yona igumbi lokugcina lonke ulwazi lokuLawula ukuFumaneka lukhutshwe kwiindawo ezahlukahlukeneyo.
Idatha yeefayile eyaziwayo (KEDB): Impazamo eyaziwayo ngumba nomqhubi omkhulu orekhodiweyo kunye nomsebenzi ojikelezayo. Iinkcukacha ezifihlakeleyo ezikhoyo zibhaliswe kwi-database eyaziwayo.
Kufuneka ukuba uqeqeshe i-ITIL ukuze abantu abafuna ukufumana ithuba lokudibanisa nabafundisi bezakhono kunye kunye nale migca yokwandisa isiseko sabo solwazi. Amathuba emisebenzi emva kokwenza i-ITIL Certification.
I-ITIL yeSatifikethi seMisebenzi yeMisebenzi
Yikuphi okungcono Six sigma okanye Itil? Yintoni eyahlukileyo?